Beesha Caalamka oo Baaq wada jir ah ka soo saaray Colaadaha Gaalkacyo – Radio Daljir
Diseembar 4, 2015 6:00 b 0
Somalia, December 04, 2015-(Daljir)_War-saxafaadeed ay si wada-jir ah usoo saareen wakiilada beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya gaar ahaana,Qaramada Midoobay Midawga Africa, urur goboleedka IGAD midawga Yurub iyo wadamo kale oo Soomaaliya taageera ayaa lugu sheegay inaysan u dulqaadan doonin dagaallo kale oo ka dhaca magaalada Gaalkacyo.
Warkan waxaa kalo ay ku cambaareeyeen dagaallo shalay ka dhacay,xarunta gobolka Mudug oo muddooyinkan ku jirtay xiisado dagaal oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug.
Waxaa kalo lugu yiri qoraalka beesha caalamka,inay ayaan darro tahay in ayadoo ay madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ay heshiis wada saxiixdeen in hadda uu mar kale dhiig ku daato magaalada.
Maamullada ku dagaallamay Gaalkacyo ayaa war saxaafadeedkaan kasoo baxay xafiisyada wadamada beesha caalamku Soomaaliya ku leeyihiin waxaa loogu jeediyay inay dhaqan galiyaan heshiiskii ay saxiixeen oo ay kala qaadaan ciidamada si dadkii barakacay ay guryahooda dib ugu laabtaaan.
“Beesha caalamku uma dulqaadanayso inuu sii socdo dagaalka lagu daadinayo dhiiga maatida sidaa darteed dawlada federalka ah waa inay u dirtaa Gaalkacyo guddi madax banaan oo qiimeyn ku sameeya cidda diidan nabadeynta” ayaa lagu yiri warkaan.
Waxaa kalo warka ka soo baxay beesha caalamka,lugu sheegay in ciddi jabisay xabad joojintii la saxiixay lala xisaabgtamo.
War-saxaafadeedka waxaa kalo lugu taageerray dadaallada nabadda ee u garwadeenka ka yahay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamullada dalka.
Gaalkacyo wararka maanta laga helayo ayaa sheegay in lakal durkiyay qaar ka mid ah ciidamada isku horfadhiyay magaalada,taaso billow u ah soo afjarida colaada soo noq noqotay ee magaalada ka tagneyd.
By: Jaamac Abdurahaman
Madaxda Maamulada Puntland iyo Gal-Mudug oo ku shirsan Garoonka Gaalkacyo